पृथ्वीमा एलियन आएको चर्चा, के साँच्चिकै हो ? यस्तो रहेछ वास्तविकता – Gazabkonews
पृथ्वीमा एलियन आएको चर्चा, के साँच्चिकै हो ? यस्तो रहेछ वास्तविकता
काठमाडौं – हामी बसेको पृथ्वी बाहेक अन्य कतै हामी जस्ता अथवा हामी भन्दा उन्नत किसिम प्राणी छन् वा छैनन् भन्नेबारे चर्चा चलेको लामो समय बितिसक्यो । तर अझै पनि केही ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। पृथ्वीमा हुने केही रहस्यमय घटनाहरुले यसबारे संकेत गरे पनि ती घटनामाथि थप अनुसन्धान हुन सकेको छैन।
बरुण धवनसँग काम गरेकी यि सुन्दरी नायिकामा देखियो सुटिगं स्थलमा थलमा नै कोरोना
यसैगरी हार्वर्ड यूनिभर्सिटीको एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेन्टका प्रोफेसर अवी लोएब (Avi Loeb) ले भर्खरै मात्र एलियन र उनका पृथ्वीमा आउने यान (यूएफओ – अन आइडेंटिफाइड अब्जेक्ट) बारे खुलासा गरेर संसारभरिको मिडियामा तरंग ल्याई दिए। प्रोफेसर लोयबले १९ अक्टूबर २०१७ मा पृथ्वीबाट देखिने गरी पास भएके अन्तरिक्ष चट्टान Oumuamua लाई सामान्य ऐस्टेरॉयड नभएर एलियनले फ्याँलेको चट्टान अथवा एलियनशिप नै भएको दावी गरेका छन। सिगारको आकृति झैँ रहेको Oumuamua लाई युनिभर्सिटी अफ हवाईको PAN -STARRS १ टेलिस्कोपले देखेको थियो। हुन त प्रोफेसरको दावी झै यसको चरित्र अन्य ऐस्टेरॉयड भन्दा बेग्लै रहेको थियो। ‘एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियलः द फर्स्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ बेयॉन्ड अर्थ’ (Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth) नामक पुस्तकमा उनले यसको बृहद चर्चा गरेका थिए। यसै सिरिजमा उनको आउने नयाँ पुस्तकमा यस विषयमा थप चर्चा गरिएका छन्।
मुम्बई । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै एक नायिका एम्बुलेन्सबाट भागेकी छिन् । ति नायिका हुन् बनिता सन्धु । कोलकतामा रहेकी उनको गत सोमबार कोरोना परिक्षण गरिएको र रिर्पोट पोजेटिभ आएसँगै उनलाई कोलकाताको एक सरकारी अस्पतालमा लगिएको थियो ।
कोलकता फिल्म ‘कविता एन्ड टेरेसा’ सुटिङको लागि पुगेकी उनले अस्पतालमा भर्ना हुन अस्वीकार गरेकी थिइन् । ति नायिका एम्बुलेन्सबाट भाग्ने कोशिस गरेसँगै अस्पताल प्रसासनले राज्य सचिवालय र स्वास्थ्य विभागलाई समेत सूचना दिएका थिए । यसको जानकारी ब्रिटिश हाइकमीशनलाई समेत दिएलगत्तै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
फिल्म ‘अक्टुबर’बाट बलिउड डेब्यु गरेकी नायिका बनिता २० डिसेम्बरमा जहाज चढेर कोलकाता पुगेकी थिइन् । बरुण धवनसँग काम गरेकी यि नायिकामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै उनी आत्तिएको बताइएको छ । कोरोना संक्रमित नै सवार जहाजबाट उनलाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो । स्विस इन्डियन फिल्म मेकर कमल मुसलले निर्देशन गरिरहेको फिल्म ‘कविता एन्ड टेरेसा‘ सुटिङ गरिरहेकी छन् ।